musha Africa Singers Tiwa Savage Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography yaTiwa Savage inokupa iwe mufananidzo wechokwadi weNhoroondo yeHupenyu hwake, kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakava nemukurumbira.
Tiwa Savage Biography - Tarisa Hupenyu hwake hwepakutanga uye Kukura kukuru.
Chokwadi chinotaurwa, iye ari pakati pezvakanyanya Akanaka Akadzi eNgerian Singer. Munguva pfupi yapfuura, zvakadaro, takaona kuti havasi vateveri vazhinji vakaverenga chinyorwa chipfupi paTiwa Savage's Biography.
Takatora nguva yedu kuigadzirira uye, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Tiwa Savage Nyaya Yevechidiki:
Kune kutanga, zita rake chairo ndiro Tiwatope Savage. Muimbi weNigerian Singer akazvarwa pazuva re5th raKukadzi 1980 kuna amai vake, Cecilia Savage, nababa vake vanozivikanwa, VaSavage muIsale Eko, Lagos State, Nigeria.
Zlatan Ibile Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi
Little Tiwa aive asiri iye ega mwana, asi asi, mumwe wevana vazhinji vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Kungofanana nemhuri zhinji dzeNigeria dzinotsvaga kuenda kunze kwemahombekombe enyika, musikana mudiki akave neropafadzo yekuzviita mumazuva ake ehudiki.
Mhuri yaTiwa Savage, panguva yaaive nemakore gumi nerimwe (gore 1991), vakawana mukana wekutama kubva kuNigeria kuenda kuLondon. Zvakanakisa, ramangwana mumhanzi mwarikadzi akarerwa nevabereki vake muLondon.
Davido Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Tiwa Savage Mhuri Yemhuri:
Kunyangwe Savage akaedza nepese paanogona napo kuti achengetedze ruzivo nezve yake Yemhuri Yemangu zvakavanzika. Chinhu chimwe chete, kunyanguvezvo, chine chokwadi ⁠— idi iro iye akaberekerwa mumhuri yakapfuma yemhuri.
Chimwe chokwadi chinonakidza chemhuri yaTiwa Savage inyaya yekuti anobva kurudzi rweYoruba muNigeria- chaizvo Lagos.
Tiwa Savage Biography - Hupenyu hwepakutanga:
Kune chokwadi chisingarambiki nezve kukura muLondon. Iyo Hupenyu Nhoroondo yaTiwa Savage inoratidza kuti aive neruzivo rwakasiyana-siyana muguta guru reEngland.
Kutanga, Tiwa akakurira muLagos kwemakore gumi nerimwe uye akadzidza zvakawanda nezve mararamiro evaLagosians. Mushure meizvozvo, akatamira kuLondon nevabereki vake nekudaro achiunganidza yakawanda yemararamiro matsva.
Kukura muLondon, Tiwa Savage aifanirwa kujairana nharaunda nyowani, iyo yaive nechunhu hwakasiyana zvikuru nekwaakange ambogara.
Kunyangwe kuda kwake kuchinjika kwainetsa, hazvina kutora nguva kusvikira Savage atove kurarama sekuzvarwa kwake muLondon.
Kizz Daniel Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Tiwa Savage Dzidzo Yemashure:
Kungofanana nevezera rake vakawanda, akadzidzawo. Muchokwadi, dzidzo ndeimwe yedombo rakasimudzira kutanga kwehupenyu hwemimhanzi hwaTiwa Savage.
Hongu, akatanga mimhanzi semuridzi wetrombone webhendi rechikoro chake cheorchestra achiri kuchikoro chesekondari.
Munguva pfupi, muimbi ari kuuya akaita rwiyo rwekuchengetedza kuna George Michael pazera ramakore gumi nematanhatu. Kare kumashure, vaimbi vepamusoro vakabvuma tarenda rake rekuimba uye vakakumbira kuti Tiwa ashande navo.
Waizviziva here?… Akatsigira vaimbi vakaita saChaka Khan, Emma Bunton, naMary J. Blige, kutaura vashoma.
Burna Vechidiki Nyaya Yevadiki Nhoroondo yeWoldold Biography Facts
Tiwa Savage Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Vanhu vazhinji vaifungidzira kuti Savage aizokurumidza kupinda mubasa rakabudirira mumimhanzi.
Nekudaro, haana kuenderera mberi nekutsvaga basa rekuimba paakanyoresa kuti adzidze accounting paUniversity yeKent. Paakapedza kudzidza, Savage akashanda paRoyal Bank yeScotland.
Zvisinei, kutenda kwake kwakasimba hakumborasikirwi zvachose. Pane ichi chinyorwa, Savage akafunga kudzoreka achidzokera kuchishuvo chake chekutanga uye akanyoresa kuBerklee College yeMumhanzi.
Ikoko akapedza kudzidza mugore ra2007 aine dhigirii remumhanzi wehunyanzvi.
Tiwa Savage Bio - Mugwagwa kune Mukurumbira Nhau:
Mushure mekupedza chikoro cheMumhanzi, ramangwana Naija mukurumbira muimbi akamutora danho rinotevera ndokuburitsa kugona kwake kuzere kuzere kupasirese.
Akasarudza muUK edition yeThe X Factor. Mumutambo, Savage akaenderera mberi kusvika kumagumo makumi maviri nemana. Zvisinei, haana kufambira mberi kusvika mukukunda mumakwikwi paakadzingwa.
Wizkid Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Achiona maitikiro azvinoitika ega pamakwikwi aya, Tiwa akaziva kuti aifanira kusunga kana achifanira kubudirira munyika inokwikwidza.
Pakurangarira pane zvakaitika kwaari, Savage akambotaura kusuwa kwake kwekusapfuurira kufainari yegumi nembiri. Zvinotoshamisa ndezvokuti, chipingamupinyi chake chikuru mune ramangwana chaisave vavengi vake. Pane kudaro, kuoma kwekubata neanoonekera.
PSquare Urwere Nhau Nyaya yezve Untold Biography Facts
Tiwa Savage Biography - Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Mushure mekutora chikamu muX-Factor, Tiwa Savage akaenderera mberi nebasa rake rekuimba.
Akabatsira mukugadzirwa kwedzimwe nziyo dzakawanda dzakanaka; Uye akatoita mubatanidzwa naFantasia Barrino, izvo zvakamuwanira kudomwa kweGrammy muna 2010.
Nekudaro, muimbi weNigerian akatsvaga kunyora zita rake pamajecha enguva. Naizvozvo, akatamira kumusha kwake ndokusaina chibvumirano naMavin Records mugore ra2012.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora Tiwa Savage's Biography, iye anopisa mukadzi muimbi akarekodha akawanda akabudirira maalbum uye track track yakaburitswa.
Nhasi, mukurumbira wake muindasitiri yevaraidzo unoratidzwa pasi rese nemubairo unogoneka waakange agamuchira.
Kunge mukadzi wake, Yemi Alade, Savage akagamuchira rudo rwakawanda kubva kune vateveri vake. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
2Baba Vechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Tiwa Savage Anoda Hupenyu- Murume, Mukomana, uye Mwanakomana:
Unoziva here?… Muimbi wedu wechikadzi muimbi uye munyori wenziyo vaibatanidzwa muhukama hunonakidza kubva paAkasimukira Mukurumbira Nhoroondo yeBiography.
Verenga pamusoro apo isu tinokupa iwe nerinonakidza ruzivo nezve iye Tiwa Savage Rudo Hupenyu.
Muchato waTiwa Savage:
Nyanzvi yeNigerian haina kuroora panguva yekuburitsa iyi bio. Zvinotyisa sezvazvinogona kurira, iye akange akaroora kumashure mugore re2013.
Chokwadi ndechekuti, murume waTiwa Savage pakutanga aive, maneja wake munguva yakapfuura. Sezvo kutsunga kwake kwekuvandudza nzvimbo inoshamisa mumimhanzi kuchikura, akafunga kujoina masimba naTanji Balogun iye maneja ipapo.
Pamwe chete, vaviri vacho vakaita rekodhi rekodhi yakatumidzwa zita 323 Varaidzo yezvinyorwa.
Sezvo nguva inopfuura, hukama hwavo hwakawedzera uye vakawedzera kudanana. Munguva pfupi, iyo shiri dzerudo dzakasarudza kuita sarudzo-inoshandura hupenyu yekusunga banga.
Tiwa Savage Yemuchato Wechinyakare wakaitika muLekki, Lagos munaNovember 2013. Mushure meizvozvo, yavo Yechichena Muchato yakaitwa musi wa26 Kubvumbi 2014 muDubai.
Tiwa Savage Vana:
Chibereko chemuchato wake kumurume wake kwaive kuzvarwa kwedangwe rake. Tiwa Savage nemurume wake, Teebillz (sekudanwa kwaanowanzoitwa) vakazivisa kuruzhinji kuti vaitarisira mwana muna 2015.
Neraki, muimbi weNigerian akabudirira kubereka mwana akanaka uyo vaviri vacho vakamutumidza kuti Jamil Balogun.
Kurambana kwaTiwa Savage:
Zvinowanzotaurwa kuti hapana chakanaka chinogara nekusingaperi. Mugore re2016, iyo yerudo nyaya yaTiwa Savage nemurume wake vakatanga kushanduka kuita zvinosiririsa mutambo.
Pakutanga, Teebillz akapomera mukadzi muimbi nezvekusavimbika. Nekudaro, muimbi wedu mukare haana kugara kumashure kuti agamuchire kupomerwa. Pasina kutambisa nguva, iye akabvisa zvese zvirevo uye zvinopomerwa zvakaitwa nemurume wake pamusoro pake.
Kunyunyuta pakati pevakaroorana kwakaramba kuchiwedzera. Saizvozvo, vakafunga kurambana kubva kumuchato wavo.
Chinhu chinotyisa pamusoro pekurambana kwavo ndechekuti shiri dzerudo dzakaparadzaniswa nerunako rwakanaka. Nekuda kweizvozvo, ivo vakachengeta hukama hwehukama uye vachiri kuenda kumabiko emwanakomana wavo ekuzvarwa.
Tiwa Savage Hupenyu Hwemhuri:
Rangarira, takambotaura kuti Savage anofarira kuchengeta Hupenyu hwake hwepachivande. Nekudaro, pazasi pane zvimwe zvinodiridza muromo nezvevabereki vaTiwa Savage nevamwe vese vemhuri yake.
Nezve Amai vaTiwa Savage:
Wakambozvibvunza here kuti amai vemukurumbira wedu vanotaridzika sei? Zvino heino mhinduro kwauri.
Amai vaTiwa Savage ndiCecilia Savage. Sezvineiwo, mukuwasha akambomupomera kuti muroyi.
Chimwe chinhu chakasarudzika icho Cecilia akaratidzira pasirese kutsigira kwake kwakadzama basa remimhanzi remwanasikana wake kubvira Tiwa aine makore gumi nematanhatu.
Pakati pevabereki vaTiwa Savage, zvinoita sekunge amai vake ndivo vepedyo uyezve akatsigira danho remwana wavo rekupinda mumimhanzi pazera diki kudaro.
Nezve Baba vaTiwa Savage:
Vazhinji vateveri vakagara vachitsvaga zita rababa vaTiwa. Asi zvavanobvunza zvinowanzoitika zvinopera. Kunyangwe muimbi wekuNigeria akaramba akanyarara pamusoro pababa vake, iye zvakadaro akaisa mufananidzo wake pasocial media.
Munguva yekupararira kwedenda reCorona Virus, Savage akariita basa rekuona kuchengetedzeka kwenhengo dzemhuri yake. Baba vake havana kusiiwa.
Mishumo inoti akavimbisa kupihwa zvinhu zvekurapa kuna baba vake kuti vabatsire kuvadzivirira kubva kuhutachiona.
Nezve vana vaTiwa Savage:
Munyori wedu wechikadzi wekuNigeria ane vakoma vaviri nehanzvadzi imwe. Kunyangwe mazita avo achiri kuzotaurwa pa internet.
Akave nekufamba kwenguva akawana mufaro mukuisa yavo mifananidzo. Tichifunga nezvechitarisiko chechiso chevakoma vake, zvinoita sekunge vabereki vaTiwa Savage vaive vasina iye semwana wekutanga wemhuri.
Nezve hama dzaTiwa Savage:
Ruzivo diki ruripo nezve sekuru baba vaTiwa Savage pamwe nambuya vababa vake. Izvi zvinosanganisirawo babamunini vake namaiguru. Kunyanya zvakadaro, zvakafanana zviripo kune ruzivo nezve hama dzaTiwa nehanzvadzi (s).
Tiwa Savage Hupenyu hweMunhu:
Unoziva here?… Tiwa Savage akamboburitsa pachena kuti chakavanzika chechitarisiko chake chehudiki kurara mumhepo inodzivirira gasi kamwe chete pamwedzi. Ehe! Iwe wakazvinzwa izvo.
Muimbi wechikadzi wekuNigeria, sevamwe vakadzi vazhinji, haaseke nechitarisiko chake. Hazvishamisi, anotaridzika chaizvo uye anoyevedza. Kunyanya zvakadaro, pfungwa yake yakasimba yekuseka ingave yakagarwa nhaka kubva kuvabereki vake.
Savage's Persona isanganiswa yeAcarius zodiac maitiro. Ndiye tsananguro yemunhu akabudirira kuratidza hunhu hwayo horoscope. Mavambo ake uye chiono chenguva yemberi hazvina mubvunzo.
Nhasi, Hunhu hwaTiwa Savage hwakakurudzira zvakanyanya kubudirira kwaanofarira muindasitiri yevaraidzo. Zvisineyi, kure nemabasa ake emumhanzi, achiri kuburitsa zvaanonyanya kufarira.
Tiwa Savage's Lifestyle:
Kubva munaChikumi 2020, mambure aTiwa Savage aifungidzirwa kuve mari inosvika mazana mapfumbamwe emamiriyoni emadhora.
Muimbi ane shasha akashanda nesimba kuti asvike padanho rebudiriro raawana nhasi. Semunhu akapfuma ane mukurumbira, Savage anovimbisa kuti anonakidzwa nehupenyu hweumbozha.
Imba yaTiwa Savage nemota:
Our hadzi Celebrity kushandiswa chikamu upfumi wake kunotenga vakawanda zvinhu zvaizoita hunovimbisa nyaradzo yake. Mugore ra 2017, akatenga imba inokwana zviuru mazana manomwe nemaviri naira muLekki, Lagos.
Uyezve, Akawanawo yakagadzirirwa Mercedes Benz V-Kirasi pamutengo wekupomba wemamirioni 60 naira. Unoziva?… Zvakatora Tiwa Savage mamirioni gumi nemashanu naira kuti aendese mota yake yakagadziriswa akananga kumba kwake payakamhara kumahombekombe eNigeria.
Tiwa Savage Chokwadi cheNhau:
Kuputira yedu Tiwa Savage Hupenyu Hupenyu Nyaya, hezvino zvimwe zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake izvo zvinokubatsira iwe kuona zvishoma zveBiography yake.
Chokwadi # 1: Iye ari Philanthropist:
Tiwa Savage haasi muimbi mukuru chete, asi iyewo akanaka muSamariya. Nekufamba kwenguva, akaronga zvakabatana kuronga kushambadzira nezvegomarara kuNigeria yose. Uyezve, anga aine zviitiko zvinotsigira mari yakawanda kuti aumbe zvikoro nyowani kumusha kwake.
Muimbi wechikadzi murwi akaratidzawo kunetsekana kwake neramangwana revadiki veNigeria. Pane ichi chinyorwa, akabatana naye Davido, Diamond Platnumz, Sarkodie, Lola Rae, uye Mi Casa kuti vabudise mimhanzi yerudo. Rwiyo urwu rwakatsigirwa neDSTV uye yakanzi "Africa Rising".
Chokwadi # 2: Iye zvakare Akaita muMamuvhi:
Kunze kwemhando dzake dzemimhanzi dzinopisa pfungwa, Savage akaitawo mune mamwe mafirimu anonakidza eNigeria.
Kutanga, akaonekwa mufirimu raNollywood ra2011 rakanzi “YeVasikana Vemavara”. Kechipiri, akakandwa chinzvimbo cheSade Banjo mumwaka 3 we Shuga - MTV terevhizheni nhepfenyuro.
Chokwadi # 3: Tiwa Savage Chitendero:
Icho chokwadi chekuti mwanakomana wavo ane zita rekuti 'Jamil', zvinoreva kuti "akanaka" muchiArabic 'hazvireve kuti iye muMuslim.
Chokwadi ndechekuti, vabereki vaTiwa Savage vaKristu, uye vakamurera mukutenda. Iwe wakapedza makore ake ehudiki semunhu asingatendi kusvika Chikunguru 2002, paakapa hupenyu hwake kuna Kristu.
Chirevo chaLegit pamusoro Tiwa Savage chinamato inoratidza zvinotevera;
“Nezuva regumi nematanhatu raJuly 16… ndakapa hupenyu hwangu kuna Jesu. Izvi zvisati zvaitika, ndakanga ndapfuura nenguva yakaoma ndichiedza kuzviwana ini. Kutanga, ndakapfuura nekurwadziwa pamoyo, uyezve, ndinoyeuka ndichichema zvakanyanya panguva iyoyo. Ndainzwa kurasika kusvikira ndanzwa huvepo hwaMwari.
Kupa hupenyu hwangu kuna Kristu kwakaita kuti ndive mukuru. Kare kumashure, ndichaparidzira kune vandisingazivi muchitima, ndichivaudza kuti "Jesu andituma kwamuri". Dzimwe nguva ndaipawo mari yangu yemwedzi mumwe chete kukereke yangu kunyangwe pavakangobvunza gumi chete "
Pazasi pane wiki zivo base yemuimbi weNigerian. Tafura yacho ichakubatsira iwe kuwana ruzivo nezve iye muchidimbu uye zvine mutsindo. Tsvaga pazasi;
Zita rizere: Tiwatope Savage.
Nick Zita: Tiwa Savage.
Akazvarwa: 5th February 1980.
Nzvimbo yekuzvarirwa: Isale Eko, Nyika yeLagos, Nigeria.
Vabereki: Cecilia Savage (Amai) naAnu Savage (Baba).
Net Worth: $ 9 miriyoni (2020 stats).
Mwanakomana: Jamil Balogun.
Murume: Tunji Balogun (Kurambana).
Vakomana: WizKid, Pato-Kumisidzana, Don-Jazzy, 2Face nezvimwe (Zvese Rumors).
Dzidzo: Berklee College of Music (Sekondari Chikoro) uye University of Kent.
Kutanga Jobho pamberi paMimhanzi: Royal Bank yeScotland.
kukwirira: 1.65 m (5 '4 ").
Weight: 50 kg (110.23 lbs)
Tinokutendai nekuverenga Biography yeVeteran Nigerian Muimbi, Tiwa Savage. Zvikawanda saka, ndinokutendai nekutenda mune Zvatiri uye Zvatinoita.
Ndichiri kuisa chinyorwa ichi paTiwa Savage's Biography uye Nyaya Yehudiki, vapepeti vedu vanga vari patariro yechokwadi uye nekururamisira.
Ndokumbira kuti uise zvaunotaura kana kutibata nesu kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino nezve muimbi veteran.